Ny ranomasina: loharanon-karena ary toeram-ponenana maharitra ho an’ireo Tatsambo | Région Boeny
Ny ranomasina: loharanon-karena ary toeram-ponenana maharitra ho an’ireo Tatsambo
11 novembre 2016 A La Une, Actualité
“Ny ranomasina ho an’ny rehetra”, ary “Fitaterana an-dranomasina tsy afa-misaraka amin’izao tontolo izao”. Ireo no loha-hevitra nanaovana ny fankalazam-paritra ny Andron’ny Tatsambo sy ny Andro manerantany ho an’ny Ranomasina teto Boeny izay natambatra ny Alakamisy 03 Novambra 2016 teny amin’ny Bord de la mer Mahajanga.
Ny Foibem-paritry ny Fitaterana sy ny Famantarana ny toetrandro, miaraka amin’ny Sampana misahana ny Fitaterana an-dranomamy sy an-dranomasina na APMF (Agence portuaire fluviale et maritime) eto Boeny no nitarika izany tao amin’ny Sekolim-pirenena fiofanana ho mpisehatra an-dranomasina eto Mahajanga, na ny ENEM (Ecole nationale d’enseignement maritime), notronin’ny Talen’ny Fandraharahana ankapobeny sy ny lafitanin’I Boeny, Atoa Bazezy Vanombe ary ireo olo-manakaja eto Mahajanga.
Voalazan’ny Sekretera Jeneralin’ny ONU hoy ny Talem-paritry ny Fitaterana sy ny Famantarana ny toetrandro fa roa lehibe ny tanjon’ny filan’ny zanak’olombelona nosoritana tamin’ny taon-dasa. Voalohany dia ny fandaharan’asa fampandrosoana maharitra ho an’ny vina 2030. Faharoa dia ny fifanarahana natao tany Paris, Frantsa, hiatrehana ny fiovaovan’ny toetrandro.
Loharanon-karena ny ranomasina
Anisany manatsara ny fiainan’olombelona sy ny filany isankarazany, hahatrarana izany vina 2030 izany ny fitaterana an-dranomasina hoy ihany izy ary mora vidy ka afaka mitondra vokatsoa ho an’ny mponina sy manatsara ny toekarena eto Madagasikara.
Tafiditra amin’ilay atao hoe économie bleue na fihariana manga, izay zotram-pampandrosoana vaovao imasoan’ny irasam-pirenenena ankehitriny.
Hoan’I Boeny manokana dia azo atao tsara ny mampitombo ny fiharin-kareny maharitra amin’ny alàlan’ny fanatsarana ny seranan-tsambon’I Mahajanga sy ny fanampiana ny sekoly ENEM eto hoy ny Talem-paritry ny Fitaterana.
Nampahafantariny fa miezaka ankilan’izay ny OMI na “Organisation Internationale de la mer” amin’ny fandrafetana lalàna sy fampirisihana ny fanamboarana sambo, manaja ny fiarovana ny tontolo iainana an-dranomasina.
Fahatsiarovana ireo Tatsambo
An-tapitrisany ireo tatsambo miasa sy mampiodina ireo sambo vaventy mamatsy ny mponina eran-tany sy mamaly ny filan’izao tontolo izao, hoy ny Talem-paritry ny Fitaterana. Tsy mora ny asan’ny tatsambo izay voatery mandao ny tokantrano mandritra fotoana maharitra sy misedra ny andro ratsy ary ny ady atao amin’ny asan’ny jiolahin-ndranomasina.
Ka sady nitsodrano azy ireo ny manampahefana isan-tsokajiny no niangavy ireo mpampiasa tatsambo mba tsy hanao ambany maso tsy hita ny fikirizana asehon’izy ireo. Tokony ho tsinjovina manokana ny fiahina ara-tsosialin’ny tatsambo sy ny ankohonany.
Nisy ny fametraham-bonikazo fahatsiarovana ireo tatsambo maty amperin’asa narahina fitsidihina ny fampiratina nataon’ireo mpisehatr’asa amin’ny fitaterana an-dranomasina